2019. Iwo mabhuku anouya kubva kumarudzi ese uye kune wese munhu | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Comics, Fantasy, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel, Nhetembo
Takatotanga 2019 mumwe akatimirira kuvimbisa gore rekunyora. Kuchave nemazita mazhinji akaburitswa uye tinotarisira kuverenga ese Kana anenge ese. Ini ndinotarisa mamwe mazita emunyika uye epasi rese ndiani achaburitsa nyaya dzavo nyowani mumarudzi ese (nhoroondo, nhema, fungidziro, kudanana, pfupi nyaya, nhetembo uye graphic novel) uye nezvese zvido.
1.1 Chii chinouya nyika neLatin America
1.2 Chii chiri kuuya kune dzimwe nyika
3 Romance novel
4 Nhoroondo yenhoroondo
5 Yengano yekufungidzira uye pfupi nyaya
7 Graphic nhoroondo
Chii chinouya nyika neLatin America
Tichava nezvazvino kubva kuSoledad Puértolas, Jesús Ferrero, Luis Landero, Carlos Zanón kana Ray Loriga, semuenzaniso. Inomutsa zita rechinyakare rerudzi rwevatema sekuzivikanwa uye kuzivikanwa se Pepe Carvalho kubva muruoko rwa Carlos Zanon en Kuzivikanwa nyaya. ari Zviteshi zvengarava zvichauya kwatiri Mumhanzi weOpera, ivo Landman una Mvura yakanaka and of Ferrero Nzvimbo dzakadzika dzika, iyo yaive iyo Café Gijon Novel Prize muna 2018. Uye ye Loriga vhiki yevhiki, Mugovera neSvondo.
Kubva kuLatin America, mienzaniso miviri iri mu Claudia Pineiro chii chinoparidza Ndiani asingadaro kana nyowani ye Jaime Bayly game Chando chifuva. Kana Leonardo Padura, wake Kugara nekunyora muCuba.
Chii chiri kuuya kune dzimwe nyika
Hapana chinobuda Serotonin, ichangoburwa uye yakavanzika kwazvo yemunyori kunyanya seFrance Michel Houellebecq, iyo inoturikidzana neimwe nyaya munzira yayo yenguva dzose. Uye chikamu chechipiri kana Bhuku 2 ra Rufu rwemukuru, ivo Haruki Murakami. Ichaonekwawo Bhokisi dema, zita rekupedzisira raunosaina Amosi Oz, munyori weIsrael akafa mazuva mashoma apfuura, kumwe kurasikirwa kukuru kwemabhuku akatisiyirwa 2018.
Maviri emazita makuru ezvenguva ino mazita echiFrench akafanana Pierre Lemaitre uye weNobel Jean Marie Gustave Le Clézio Vanotipa mazita avo matsva maviri kwatiri. Clézio inoburitsa Bitna pasi pedenga reSeoul uye kubva kuLemaitre kunouya Mavara emoto, chikamu chechipiri chetatu chakatanga neyakafarirwa Ndokuona kumusoro uko, iyo yakamuwanisa iye 2014 Goncourt Prize.
Kubva kuchamhembe, chiSweden Jonas jonasson inodzoka iine nyaya inopenga uye inosetsa kwazvo mu Sekuru vaya vakadzoka kuzoponesa nyika.
Nguva-anokudzwa mazita eiyo genus anovimbisa imwe yakanaka yakasviba goho. Andrea wekusingaperi Camillery anotiunzira mumwe wekusingaperi, muchengeti wake Salvo Montalbano en Iko kufara-kuenda-kutenderera kwekuvhiringidzika. Uye american Michael Connelly ane itsva Harry bosch en Zviso zviviri zvechokwadi. Uye kuenderera uine mamwe mavara echinyakare futi Donna leon inotipa nyaya itsva yemutungamiriri wake Brunetti, Muzita remwanakomana.
Zvimwe zvinorema ndizvo Mary Higgins Clark kupa Dhanzi rekupedzisira. The gaul Bernard minier anosiya mukuru wake Martin Servaz akamira kuti aende kuSeattle pamwe nekuferefetwa kwekufa kwemusikana achiri kuyaruka mu Nyaya yakashata. Nenzira, Minier achave ari pamutambo unotevera BCBlack. Uye muzhizha kunouya rimwe zita rakamirirwa kwenguva refu, banga, zvakadaro ndisina dudziro yechiSpanish, uye achiratidzira muchengeti weNorway Harry hole, kubva kuna tenzi weiyo genre Jo Nesbø.
Imwe yedzinogara iri fashoni genre ine akawanda mazita akakurumbira senge Nora Robertsne Iyo bay yekugomera, kana kuti Nicholas Anobvunda Nekugomera Kwese. Ivo vanotumirawo nyaya nyowani Jennifer Armentrout game Semoto, Mercedes Galician, izvo zvinoratidza Kushora mugumokana Corinne michaels game Dime ini ndinonyarara.
Muchokwadi, ivo vanofungidzirwa kuti-vatengesi vegore vanofungidzirwa mune iyi genre ne Sarah anokakama game Mwaka wema dolphin kana chisina kupisa moto Danielle Steel game MaDuchess. Tichaona.
Mamwe mazita akakodzera achave Tyll, de Daniel Kehmann, Venezia Bhuruu, ivo Marina G. Torrus o Nyika yatiri kurarama, ivo Anthony Trollope. Zvinonzwika zvakanaka zvakare Yekupedzisira Neanderthal, ivo Claire cameronuye Mwanakomana wezuva, ivo Morgan scott.
Yengano yekufungidzira uye pfupi nyaya
Iwo mafeni mazhinji e Margaret Atwood Ivo vane mhanza nekuti ivo vanozove nehunhu hwavo, Ngano dzakaipa. Uye nyaya dzakazara dze Evelio Rosero and of Edith Wharton.
Vaverengi vanonakidza vanozove nazvo Chinhu chakanakisa nezvekuenda kudzoka, zita idzva remusoro we Albert Espinosa. Uye yechinyakare senge Firipi K. Dick game Nyika yakasikwa naJones, kuburitswazve kwebhuku risingafungidzike, rakaburitswa kekutanga uye chete nguva muchiSpanish naCénit muna 1960.
Gore rino rinoratidzira bicentennial yekuberekwa kwe Walt Whitman, saka kuburitswa kwake Mashizha eGrass. Zvakare zvakaburitswa Pedzisa nhetembo de Raymond Carver.
Gore rinovhura na Sabrina, ivo Nick Drnaso, yekutanga graphic novel yakadomwa yeMukurumbira Man Booker Award. Uye kuratidza kushevedzera kweiyo Comic uye Graphic Novel Mubairo kubva kumubudisi Bruguera, chinyorwa chine mukurumbira icho Random House yakawana uye icho chichagonesa uyo anokunda kutsikisa basa ravo navo. Tichasunungurwawo mitsva itsva yemasikisi epakutanga uye kugadzirisa kwekare saMortadelo kana Filemon kana Zipi naZape.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 2019. Iwo mabhuku anouya kubva kumarudzi ese uye kune ese munhu
Alfonso Ortiz akadaro
Mhoroi, ini ndiri Alfonso Ortiz, munguva pfupi basa rangu nyowani rekunyora, mwana wehumhi, achange ari pamapuratifomu makuru. Anofara 2019.
Pindura kuna alfonso ortiz
Vanyori vanoenda munzvimbo yeruzhinji muna 2019